Mutungamiri weAmerica, VaTrump, naVaBiden, Vomhanyira kuGeorgia Kunobatsira Kutsvagira nhengo Dzavo Rutsigiro
Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden nemutungamiri wenyika, VaDonald Trump vari kupinda muGeorgia kunobatsira kutsvaga rutsigiro kunhengo dzavo.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, veRepublican party, pamwe nevakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vakamirira kugadzwa, VaJoe Biden, vebato reDemocratic Party, neMuvhuro vari kutarisirwa kupinda mudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzemapato avo kutsvaga rutsigiro musarudzo yeseneti iri kudzokororwa, kana kuti run-off, iyo iriko neChipiri.
Mutewedzeri wemutungamiri wenyika, VaMike Pence, vari kutarisirwawo zvakare kupinda muGeorgia.
Vakasarudzwa kuve mutewedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira kugadzwa, Amai Kamala Harris, vakanga vari mudunhu iriwo neSvondo vachibatsirawo nhengo dzebato ravo reDemocratic Party, VaJon Ossoff, avo vari kukweshana naVaDavid Perdue veRepublican Party, pamwe naReverend Raphael Warnock, avo vari kukwikwidzana naAmai Kelly Loeffler veRepublican Party.
Chiizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reGoergia vari sachigaro veZimExpo, Doctor Tonderai Tela, vanoti sarudzo iyi yakakosha zvikuru kumapato maviri aya sezvo bato rinenge rakunda muzvigaro zvose zviri zviviri riri iro rinenge rave nemasimba mudare reSeneti.
Pari zvino Republican Party ndiyo ine zvigaro zvakawanda muSeneti zvinoita makumi mashanu, kuchitiwo Democratic Party iine zvigaro makumi mana nezvisere. Zvimwe zvigaro zviviri zviri kunhengo dzakazvimirira mudare rine zvigaro zana.
Sarudzo iyi iri kuuya pamberi pekutambirwa zviri pamutemo neChitatu kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zviri kunzi naVaTrump pamwe nemamwe maseneta ebato riri kutonga reRepublican Party vachapikisa.
Doctor Tela vanoti vagari vemuGeorgia vakatotanga kare kuvhota musarudzo iyi, inonzi early voting muChirungu, vachiti achakunda achakunda nemavhoti mashomashoma sezvo pari kuratidza mangange kune vose vari kukwikwidzana.
Hurukuro naDoctor Tonderai Tela